“आज मेरो ”कान का’टेर भिडियो सार्वजनिक गर्ने छु!दिपेन्द्र कडेल – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“आज मेरो ”कान का’टेर भिडियो सार्वजनिक गर्ने छु!दिपेन्द्र कडेल
3 months ago मेचीमहाकाली संवाददाता
“काठमाडौं :-केही लामो समय देखि सामाजिक संजालमा आफ्नो अभि व्यक्ति दिदै आइ रहेका दिपेन्द्र कन्डेल एकासी पछिल्लो समय चुकेका छन ! उनले भनेका थिए! यदि शेरबहादुर देउवा यो देशमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्यो भने म मिडियासामु मेरो कान का’टेर पातमा राख्ने छु!त्यही उनको अभिव्यक्ति अनुसार आज ´कान का’टेर भिडियो सार्वजनिक गर्ने भए का छन!
“यदि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बने “कान का’टेर पातमा राख्ने” मेरो अभिब्यक्ति अनुसार भोली कान का’टेर पातमा राखेको भिडियो पोस्ट गर्नेछु। पब्लिक इन्नोभेटर अ’न्तर्गत भएका (राजनीतिक, अर्थिक र सामाजिक) अध्याय मध्ये राजनीतिक अध्याय केपी शर्मा ओलिको बहिर्गमन सँङै निस्क्रिय भएको छ।”
“यो पनि:-“राजेन्द्र महतो विश्वास, सोमबार दिउँसो, चकनाचुर भएपछि, ठूलो मारमा”
“जसपा नेता राजेन्द्र महतोसँगको कुराकानीअनुसार निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सर्वोच्चले सोमबार ठ्याक्कै त्यस्तै फैसला दिन्छ भन्ने अलिकति पनि लागेको थिएन । तर, नसोचेको शैलीमा उहाँले सत्ताच्युत हुनुपरेको छ । अदालतले १३ दिने उपप्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिएपछि ढिलैगरी पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास छाडेका महतोलाई उनले केही दिनअघि मात्रै भनेका थिए, ‘मेरो मागलाई अदालतले स्वीकार गर्छ । गरेन भने पनि प्रधानमन्त्री चयनको विषय संसदमा जान्छ । त्यसबेला जुन परिस्थिति हुन्छ, त्यसमा पनि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु ।’
“महतोले सोधे, ‘त्यो परिस्थिति भनेको के हो ?’ ओलीले भने, ‘एमालेलाई म मिलाउँछु । माधव नेपाल यति कमजोर हुन्छन् कि, उनीसँग धेरै मान्छे रहँदैनन् । त्यसबेला बाध्यताबस माधवले ह्वीप मान्छन् वा चूप लाग्छन् । त्यसकारण सरकार बनाउन सहजता हुन्छ ।’
“महतोहरुले राजपालाई व्युँताउनका लागि गरेको प्रयास विफल भएकोबारे ओलीसँग सोधे । भने, ‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई सहयोग गर्छ । तर, एक्सपोज भएर सहयोग गर्न उनीहरुलाई पनि गाह्रो छ नि †’ आफू प्रधानमन्त्री रहिरहे जसपाको विवादमा पनि हरसम्भव निर्वाचन आयोगको सहयोग गराउने बचन दिएका थिए । र, यिनै कुराले ओलीप्रति महतोहरु विश्वस्त थिए, जुन विश्वास सोमबार दिउँसो चकनाचुर हुन पुगेको छ ।-”
“त्यही विश्वासका कारण राजविराजमा ओलीको पक्षमा निस्किएका जुलुसमा पूर्वराजपाले अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेको थियो । किनभने, चुनावमा समेत गठबन्धन बनाएर सँगै जाने सल्लाह थियो । रातो पाटीमा यो खबर छ ।”
Previous “सपथपछि शेरबहादुर,देउवाको पहिलो, निर्णय कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक”नियुक्ति होस?
Next “ओली बालुवाटार,बाट बालकोट, नपुग्दै भिम रावलले बाध्य भएर निकाले यस्तो बिज्ञप्ति”
14 hours ago मेचीमहाकाली संवाददाता
17 hours ago मेचीमहाकाली संवाददाता